Liverpool oo £75m ku soo iibsanaysa daafaca kooxda Southampton | Raadgoob
Liverpool oo £75m ku soo iibsanaysa daafaca kooxda Southampton
Ciyaaryahanka daafaca dhexe uga dheela kooxda Southampton, Virgil van Dijk, ayaa 1-da bisha Janaayo markii uu furmo suuqa kala iibsiga ee ciyaartoyda waxa uu lacagtii ugu badneyd ee lagu kala iibsado daafac oo ah £75m ugu biiri doonaa kooxda Liverpool.
Ciyaaryahankan u dheela xulka The Netherlands ayaa la filayay inuu xagaagii la soo dhaafay ku biiro kooxdan lagu naaneeso Reds-ka kaddib markii uu ciyaaryahanka gudbiyay codsigii uu kooxda Southampton uga tegi lahaa.
Hasayeeshee tallaabadaasi waxa ay guuldarraysatay kaddib markii ay kooxda Liverpool raaligelin ka bixisay eedo ah in si khaldan oo sharci-darro ah ay ku baadigoobaysay 26-jirkan.
Lacagta ciyaaryahankan lagu kala iibsanayo ayaa noqonaysa middii ugu badneyd ee abid laga bixiyo daafac, kooxda Manchester City ayaa July-dii la soo dhaafay waxa ay £52m kooxda Monaco uga soo iibsatay daafac Benjamin Mendy.
Van Dijk ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay oo ay sharaf u tahay inuu qandaraas u saxiixo kooxda Liverpool, sidoo kalana waxa uu aqbalay in bilihii la soo dhaafay ay xaaladdu ku adkeyd.
Ciyaaryahankan ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu lix sanno oo qandaraas ah u saxiixay kooxda Southampton, isagoo kooxdaasi kaga soo biiray kooxda Celtic oo loogaga soo iibsaday £13m bishii Sibteembar 2015, lacagta haatan lagu iibsadayna waxaa ka faa’iidi doonta kooxda Celtic oo heli doonta boqolkiiba 10, taas oo qeyb ka aheyd heshiiskii markii hore ciyaaryahanka ay ku iibisay.
Kooxda ku dheesha garoonka Anfield ayaa ku dhawaaqday in ciyaaryahankan uu xiran doono nambarka afraad.